२३ रनले हरायो विराटनगर किंग्सले टिम चौराहलाई - Everest Dainik - News from Nepal
२३ रनले हरायो विराटनगर किंग्सले टिम चौराहलाई
धनगढी, चैत २९ । सगरमाथा धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) क्रिकेट अन्तर्गत मंगलबारको पहिलो खेलमा विराटनगर किंग्सले धनगढी टिम चौराहलाई २३ रनले पराजित गरेको छ ।
टस हारेको विराटनगर किंग्सले कप्तान शरद भेषावकरको ४६ र अनिल साहको २८ रनमा ६ विकेट गुमाइ १३४ रन बनाएको थियो । सुशील कँडेल र शरद भेषावकरले ३र३ तथा जितेन्द्र मुखियाले २ विकेट लिएपछि टिम चौराहा धनगढी १११–९ मा खुम्चियो ।
याे पनि पढ्नुस ५ बलमा ५ छक्का प्रहार गर्ने कमलको आज पनि कमाल, भारतले दियो २२९ रनको लक्ष्य
खेलको म्यान अफ दि म्याच शरद भेषावकर भए ।
सगरमाथा धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) क्रिकेट अन्तर्गत मंगलबारको पहिलो खेलमा विराटनगर किंग्सले धनगढी टिम चौराहलाई १३५ रनको सामान्य लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । टस हारेर पहिले व्याटिङमा आएको विराटनगर किंग्सले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाउँदै १सय ३४ रन बनायो ।
याे पनि पढ्नुस सिरिज खेल्न नेपाली क्रिकेट टोली युएई जाँदै, को–को छन् टिममा ?
खेलमा विराटनगर किंग्सका तर्फबाट कप्तान शरद भेषावकरले सर्वाधिक ४६ रन बनाए । उनले ३२ बलमा ४६ रन बटुले ।
यसैगरी टिम चौराहका तर्फबाट ललित राजवंशीले ४ ओभर बलिङ गर्दै २५ रन खर्चेर २ विकेट चट्काए भने सुशन भारी, रामनरेश गिरी र आरिफ शेखले १र१ विकेट लिए ।
सगरमाथा धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) क्रिकेट अन्तर्गत मंगलबारको पहिलो खेल विराटनगर किंग्स र धनगढी टीम चौराहबीच हुँदै छ ।
याे पनि पढ्नुस कहिले तयार हुन्छ मुलपानी क्रिकेट मैदान ? (भिडियो सहित)
मंगलबार बिहान टीम चौराहले टस जितेर फिल्डिङ गर्ने निर्णय गरेको छ । टीम चौराहका कप्तान पारस खड्का रहेका छन् भने विराटनगर किंग्सका कप्तान शरद भेषावकर छन । खेल सुरु भएको छ ।
हामी ट्विटरबाट खेलको प्रत्यक्ष जानकारी दिइरहेका छौं ।